ECommerce ozi ọma bụ websaịtị gbadoro anya n'iwetara ozi na akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na azụmaahịa eletrọniki nye ndị na-anya ya. Tọrọ ntọala na 2013, na obere oge ọ hiwela onwe ya dị ka a Ntughari aka na mpaghara gi, nke kachasị na-ekele ndị otu nchịkọta akụkọ, nke ị nwere ike ịlele ebe a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ndepụta nke gburugburu na anyị tụlere na saịtị ahụ, ị ​​nwere ike ịga na ngalaba nkebi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ soro anyi rụọ ọrụ, zuru ezu ụdị a anyị ga-akpọtụrụkwa gị ozugbo o kwere omume.
Enwere m mmasị ịzụ ahịa na usoro iji melite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ eCommerce. Ya mere, ana m ekekọrịta ihe ọmụma m na isiokwu ndị nwere ike ịmasị ndị na-agụ akwụkwọ, ma ọ bụ n'ihi na ha nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ akara aka nke ha.
Mmasị maka teknụzụ na ecommerce. Ndị na-eri ụdị ngwaahịa dị n'ịntanetị niile, yana ahụmịhe n'ịmepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere nyiwe dị ka PrestaShop na ihe ndị yiri ya. Na-agbalị mgbe niile ka ị na-emelite ihe niile gbasara ụwa a.
Lomalọma na Sayensị Azụmaahịa, na ngalaba nke Ahịa, Mgbasa Ozi na Ahịa, mikpuru n'ime ụwa nke akụkọ, n'akụkụ niile site na teknụzụ ọhụụ maka ịmata ihe, ọkachamara na ego, Forex, ego, Ahịa ahịa, itinye ego na akụkọ na ego, mana ọkachasị onye hụrụ ahịa mba na mba ụwa n'anya, ihe dị mkpa iji nweta ma nye ndị na-agụ ego ezigbo akụkọ na ndụmọdụ kacha mma.
Mmasị maka mpaghara ịntanetị, ebe ọ bụ na ọ dị na azụmahịa azụmahịa niile anyị na-eme. Ya mere, ọ dịghị ihe dị mma karịa ilekwasị anya na akụkọ kachasị ọhụrụ na azụmahịa kọmputa.